Soo-saareyaasha Bixiyaha Haydarooliga - Soosaarayaasha Soo-Saaraha Haydarooliga
xajin degdeg ah
Guulaha la gaadhay
ATG haydarooliga qabashada
nooca xamuulka isteerinka
In ka badan 12 sano waayo-aragnimo wax soo saar dubba-haare Haydarooliga, HMB waxay macaamiisheenna siin kartaa dubbayaal lagu kalsoonaan karo, kharash wax ku ool ah oo waaraya oo si ballaadhan loogu isticmaali karo Dhismaha, Macdanta, Burburka iyo wixii la mid ah. nooca, nooca gadaal ama nooca isteerinka isteerinka, waxaad ka heli kartaa waxa aad rabto HMB.
Nooca ugu sareeya
Nooca Xamuulka ee Backhoe
Nooca gawaarida istiraatiijiga ah
Foomka waxyeellada bistoolada iyo sababta hydraulic ...
1. Noocyada ugu muhiimsan ee dhaawaca piston: (1) Xagashada dusha sare; (2) Bistoolada ayaa jabtay; (3) Dildilaac iyo jarjar ayaa dhacaya ...
Dhamaantiin waad ku mahadsan tihiin taageerada aad siisaan Yantai ...
Dhamaantiin waad ku mahadsan tihiin taageeradiina Yantai Jiwei sanadkii la soo dhaafay. Si aan u muujino mahadnaqeena kalgacalka iyo rajada wanaagsan aan kuu qabo, Yantai Jiwei wuxuu yiri adigu c ...
HMB 2020 Waxqabadka Bullying
Yantai Jiwei 2020 (Xagaaga) "Isku-xirnaanta, Isgaarsiinta, Iskaashiga" Kooxda Bullying Activ ...
EXCON INDIA 2019 GUULEYSTA
Excon India 2019 waxaa la dhammeeyay 14-kii Diseembar, mahadsanid dhammaan macaamiisheenna oo ku booqday istaanka HMB meel fog, th ...
Bandhigga Dubai Big 5
Bariga Dhexe oo la taaban karo 2019 / Big 5 culus 2019, oo lagu qabtay 25-28 Noofambar 2019 Dubai Dubai Imaaraadka Carabta, cam ...
Cinwaanka: Maya. 80 Dawang Road ， Degmada Fushan, Magaalada Yantai, Gobolka Shandong, Shiinaha